မွန်ပြည်နယ်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်း ၄၀ဝ ကျော် ရေဘေးကြောင့်ပိတ်လိုက်ရ - Yangon Media Group
မွန်ပြည်နယ်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်း ၄၀ဝ ကျော် ရေဘေးကြောင့်ပိတ်လိုက်ရ
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၉-မွန်ပြည်နယ် ၏မြို့နယ်သုံးခုရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်း ၄၀ဝ ကျော်ကို ရေကြီး နစ်မြုပ်မှုကြောင့် ပိတ်ထားလိုက် ရပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် ယခုရက် ပိုင်းအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာ သွန်းခြင်းကြောင့် သံလွင်မြစ်ရေ၊ ဘီးလင်းမြစ်ရေ၊ မုတ္တမမြစ်ရေတို့ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ကျေးရွာ ရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ နေအိမ် များ၊ဆေးရုံများသည် ဩဂုတ် ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကာ ရေကြီး နစ်မြုပ်မှုဒဏ်ကို စတင်ခံစားခဲ့ရ ပြီး မော်လမြိုင်မြို့၊ ပေါင်မြို့၊သံဖြူ ဇရပ်မြို့တို့ရှိ အခြေခံပညာကျောင်း ၄၀ဝ ကျော်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရပြီ ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်ပညာ ရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
“မွန်ပြည်နယ်တစ်လုံးတော့ မပိတ်ပါဘူး။ ကျိုက်ထိုဆိုရင်တစ် ကျောင်းမှမပိတ်ထားပါဘူး။ ကျန် တဲ့နေရာတွေကတော့ တစ်ကျောင်း စ နှစ်ကျောင်းစပိတ်တာတွေတော့ ရှိတယ်။ အားလုံးပိတ်ထားရတာ က မော်လမြိုင်မှာဆိုရင် ၁၄၉ ကျောင်း၊ ပေါင်မြို့နယ်မှ ၁၆၀၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်မှာဆိုရင် ၁၃၀ လောက်ပိတ်ထားရပါတယ်” ဟု မွန်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်လဲ့လဲ့ ကြည်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဩ ဂုတ် ၉ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
မြစ်ရေကြီးမှုကြောင့် ပိတ် ထားခဲ့ရသောကျောင်းများကို မြစ် ရေကျမှ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည် ဖြစ်ရာ ကျောင်းပိတ်ရက်ကို ဩဂုတ် ၁၂ ရက်အထိ ပိတ်ထားမည်ဟု အခြေခံပညာဦးစီးဌာနသို့ အ ကြောင်းကြားထားကြောင်း၊ မွန် ပြည်နယ်၊ မုတ္တမ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ပေါင်၊ မော်လမြိုင်မြို့တို့သည် ဩဂုတ် ၉ ရက်မှစတင်ပြီး မြစ် ရေကြီးမှုဒဏ်ကို ခံစားနေရသော် လည်း ဘီးလင်းနှင့်သထုံ၊ကျိုက်မ ရောမြို့တို့သည်ပြီးခဲ့သည့် နှစ် ရက်၊ သုံးရက်ခန့်မှစတင်ကာ မြစ် ရေကြီးခြင်းဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
]]ကျွန်မတို့ကတော့ ၁၂ ရက် နေ့အထိ ကျောင်းပိတ်ထားမယ် လို့ရုံးချုပ်ကို တင်ထားတယ်။ ၁၃ ရက်နေ့လောက်တော့ပြန်ဖွင့်နိုင် မယ်ထင်ပါတယ်}}ဟု ဒေါ်လဲ့လဲ့ ကြည်မှ ဆက်လက်ပြောကြား သည်။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မြစ်ရေ ကြီးမှုကြောင့် လမ်းများပျက်စီး ခြင်း၊ ဆေးရုံများကို ပြောင်းရွှေ့ ရခြင်းများပြုလုပ်နေရသလို၊ မြေ ပြိုမှုကြောင့်လူသေဆုံးမှုများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အများပြည်သူလှူဒါန်းငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ၁၂၀ဝ၀ ဖြင့် မီးတိုင်ပေါင်း ၄၈၀ဝ ကျော်စိုက်ထူပြီးဖြစ်
အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲသစ်အမည်စာရင်းကို သမ္မတထရန့် အဆိုပြု
မြောက်ကိုရီးယား ဒေသဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကင်ဂျုံအန် လာရောက်မဲပေး
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တော် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေးတွင် အမှိုက်ပြဿနာသည် အဆိုးရွား?
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဇာတ်ရုပ်တစ်ခုကို ရိုက်ကူးရမှာမို့ အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ အမျာြး?
မွန်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဆားကွင်းများမှာ လယ်ယာမြေများဖြစ်နေသည့် အတွက် ဆားကွင်းနေရာ ရရှိရန်ြ??
သင်္ကြန်ကာလနီးသည့် အချိန်တွင် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် မြဝတီမြို့၌ ထိုင်း ဘတ်ငွေဈေး စံချိန်တင်ြ?